Local – Vibe News Network
Kubuyele esimweni esijwayelekile ukusebenza kwezinye zezitimela eKZN
16/10/2017 16/10/2017 Ntombifuthi Zikhali
Inkampani yezitimela KwaZulu-Natal iMetrorail ithi ukusebenza kwabanye ojantshi bayo bezitimela kuqalile namhlanje ekuseni. Lokhu kuza ngemuva kokuba sekuphele isikhathi cishe esingange viki izitimela zingasebenzi kulandela isiphepho esihlasele kulesisifundazwe ngoLwesibili olwedlule. OwakaMetrorail uIsabel van der Westhuizen […]
Umbhikisho uphenduke udlame eMkhuze
13/10/2017 Siyanda Poseka
Umbhikisho uphenduke udlame endaweni yaseMkhuze lapho iqembu labasebenzi belibhikisha khona, laba sebenzi balibangise endaweni yakwanNongoma emgwaqeni onguthela wayeka uN2. Okhulumela amaphoyisa uThulani Zwane usexwayise abashayeli bezimoto ukuba basebenzise eminye imigwaqo njengoba lomgwaqo uN2 uvalekile. uZwane […]
Sebebathathu abasolwa ababulewe esigamekweni saku-N2
04/08/2017 05/08/2017 Vibe FM
Durban – Sekudutshulwe kwabulawa omunye wabasolwa abazame ukubalekela ukuboshwa ngokungena ehlathini kulandela isigameko sokudubula esenzeke ku-N2. Lokhu kubeka isibalo sabasolwa ababulewe kulesi sigameko esenzeke eduzane nakuQueen Nandi Drive. La basolwa bavinjwe behamba ngemoto eduniwe besayo […]
Creative and fun learning at PROTEC Tongaat vacation classes
The three teams with the strongest bridges will participate in the SAICE KZN inter-school’s competition on August 10. The school holidays were jam-packed with exciting activities for PROTEC Tongaat pupils who participated in a variety […]
EFF marks fourth anniversary in Durban
Country’s wealth must be equally shared, Malema addresses fourth anniversary EFF leader, Julius Malema says despite the current economic inequality in South Africa, it is possible to get to a point where black South Africans […]
Ababili bakwaNongoma bagwetshwe udilikajele ngelokubulala
Durban – USifiso Nkosinathi Zulu, 21, kanye noKwanele Zulu, 17, balahlwe yicala lokubulala, bagwetshwa udilikajele eNkantolo yeseFunda kwaNongoma. USifiso ugwetshwe iminyaka engu-25 kanti uKwanele yena ugwetshwe iminyaka engu-15. Laba balahlwe yicala elenzeka ngomhlaka-3 Meyi 2016 […]
KwaZulu, Local, News
Umsakazo i-702 usobishini ngokuqhathanisa izingane ezinsundu nezinja
Durban – Umsakazo i-702 usobishini kulandela isithombe esifakwe enkundleni yezokuxhumana ubuza ukuthi yini enhle kakhulu izingane ezihambayo noma izinja. Lokhu kwenzeke ngesikhathi lo msakazo ubunomkhankaso ne-MTN obizwa nge-Walk the Talk, ngeSonto lapho abantu belwela ukuhlukunyezwa […]
Isikhulu seSABC esimisiwe sesivumile ukushiya
Johannesburg – Isikhulu esibambe njenge-CEO ye-SABC esimisiwe, uJames Aguma, usesalelwe isikhathi esingaphambi kokushaya kwehora lokuqala ngoLwesithathu emini ukuthi afake incwadi yokwesula. USihlalo wesigcawu sokuqondiswa kwakhe izigwegwe, uTaki Madima, umemezele lokhu ngosuku lwesihlanu lokuqondiswa kwakhe izigwegwe eSandton, […]